Hiriira morii Oromoo Amerikaa Kaabaa, Washington,DC keessatti jiranii qophii hardhaatti itti deebina – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosHiriira morii Oromoo Amerikaa Kaabaa, Washington,DC keessatti jiranii qophii hardhaatti itti deebina
Hidhaa fi reebicha/dararaa Oromoota Irreeffannaaf kutaalee Oromiyaa adda addaa irraa gara Magaalaa Finfinneetti imalaa jiran irratti LMKIIn Magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatamaa jiruun wal-qabatee: Karra Finfinnee 5’n irratti sakattaa cimaan geggeeffamaa jiraachuu; Oromoota magaalicha keessa jiraatanis adamsuufi hidhuun hammaatee jiraachuu; Magaalaa Shaashamannee keessattis, guyyoota lamaan kana keessatti, Oromootni baay’inaan 600 ol ta’an hidhamanii jiraachuu.
#RSWO – Onk 1, 2020
OMN: Rally at state department (aajaa Alaa)
Namoonni dhiyoo kana HD ABO Jaal Daawud Ibsaa irratti xiyyeeffatanii olola rakasha oofaa ba’ani harkatti fashaluu quba qqbna. Jaal Daawud Ibsaa Mallattoo qabsoo Bilisummaa Oromoo fi dantaa sabaa akka hin sharfne diinnis firris ifatti jala muree hubateera.
Torbee kana keessa ergamtoonni golee Oromiyaa hunda keessa bobbaafamuun Jaal Daawud’tu nu erge maqaa jedhuun akka socho’aa jiran gaabaasni nu qaqqabeera. Ummati keenya keessattuu Caasaan ABO shira xixiqqoo akkasii irraa akka of eegdan beeksifna. Dirqamni karaa Dhaabaa(ABO) kennamu caasaa qulqulluu keessaan isin qaqqaba.